कोरोना भाइरस अमेरिका, युरोप र चाइना जस्ता राष्ट्रहरुले समझदारीमै ल्याइएको हुन सक्छन् - Himali Patrika
कोरोना भाइरस अमेरिका, युरोप र चाइना जस्ता राष्ट्रहरुले समझदारीमै ल्याइएको हुन सक्छन्
हिमाली पत्रिका २६ जेष्ठ २०७७, 4:29 pm
सर्जन गौतम / बाम विश्लेषक
युवा वुद्धिजीवी तथा बाम विश्लेषक सर्जन गौतमले कोरोना भाइरस अमेरिका, युरोप र चीन चाइनाजस्ता राष्ट्रहरुकै समझदारी ल्याइएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस युरोप, अमेरिका जस्ता पुजीबादी मुलुकमा आप्रवासी कामदार हटाएर रोबोट र इन्टरनेट प्रविधीमा आधारित कृत्रिम बौद्धिकता प्रतिस्थापना गर्ने नाउँमायी यी सबै देशहरु मिलेर रचिएको एक प्रपन्च मात्रै रहेको उहाँको तर्क छ। सर्जन गौतमको बाँकी लेख यस प्रकार छ..
दोस्रो विश्वयुद्धले महाविनाशकारी परिणाम ल्यायो । काम गर्ने उमेरका मानिसहरुको मृत्यु भयो । उद्योगधन्दा , कलकारखाना ध्वस्त भए । एउटै देश आत्मनिर्भर बन्ने र सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने स्थिती रहेन । २१ मिलियन मान्छे त युरोपमा मात्र शरणार्थी भएका थिए । एकातिर शरणार्थी समस्या, अर्कोतिर उद्योग संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता पुरै युरोपभरी शरणार्थी र आप्रवासी सम्बन्धी कानुनहरु लचिलो बनाइयो ।
आज तेस्रो विश्वका करोडौं मानिस युरोप र अमेरिकामा काम गर्छन् र विप्रेषणको रुपमा अरबौं डलर आ- आफ्ना देशमा पठाउँछन् । जो अमेरिका र युरोपजस्ता देशहरुको लागि पटक्कै लाभप्रद रहेको छैन । पुँजीपति र कर्पोरेटको प्रवृत्ति बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने नै हो , चाहे त्यो मानवीयता र वातावरणको विनाशकै मुल्यमा किन नहोस् ।
पछिल्लो समयमा रोबोट र इन्टरनेट प्रविधीमा आधारित कृत्रिम बौद्धिकताको कारण एकदमै कम म्यानपावरको प्रयोग गरेर बढी भन्दा बढी नाफा कमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना पैदा भएको छ । यसको लागि तेस्रो विश्वबाट काम गर्न गएका आप्रवासी कामदार हटाउन आवश्यक छ । सबैलाई थाहा छ , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो आप्रवासी विरोधी नीति र अमेरिका फर्स्टको नाराबाट अगाडि आएका हुन् । संसारमा यही समयमा धेरैजसो देशहरुमा यस्तै अनुदारवादी शासक सत्तामा आएका छन् ।
ट्रम्पले धेरैपटक आप्रवासी र शरणार्थीहरु सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कोशिश गरेपनी त्यहाँको लोकतान्त्रिक संरचनाको बलियोपनाका कारण सम्भव भएको छैन । त्यस परिस्थितिमा कोरोनालाई समाधानको उपाएको रुपमा फैलाइएको हो । यो पुरानो सार्स आदि फ्लुका भाइरसहरुको म्युटेसन गराएर फैलाएको पनि हुन सक्छ । सतहमा विवाद देखिए पनि यसमा युरोप, अमेरिका र चाइनाजस्ता साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुको बीचमा समझदारी भएको हुन सक्छ ।
अनि त्यही देशमा कोरोना बढी फैलाइएको छ , जहाँ आप्रवासनको बढी समस्या छ । अमेरिकामा जनस्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न चासो नदेखाउनुको कारण पनि त्यही हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन कसरी यसको मतियार बनेको छ त ? यसलाई हेरौं । कोरोनाको रोकथामको मोडलको रुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउनलाई अगाडि सार्‍यो । जसले एकैचोटी मजदुरहरुले रोजगारी गुमाए र उनीहरु आ- आफ्नो देश फर्कियो । यसले आप्रवासीहरुलाई श्रमबजारबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्य पूरा भयो ।
अर्कोतिर संक्रमण चारैतिर फैलियो ।नत्र यो भन्दा कयौं गुणा बढी प्राणघातक रोगमा समेत लकडाउन गरिएको थिएन । कोरोनाबाहेक अरु कुनै रोगमा लक्षण नदेखिएका मानिसलाई परीक्षण गरेर तँ रोगी होस् भनेको तपाइँ हामीलाई थाहा छ ? यदि स्वस्थ मानिसलाई पनि तँ विरामी होस् , केही समयमा मर्छस् भन्ने हो भने उ विरामी हुने र मर्ने बढी सम्भावना रहन्छ । हाम्रै शरीरको परीक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ क्षयरोग वा अन्य रोगका कीटाणु पनि हुन सक्छन् ।
एलोपेथिक डाक्टरको समेत पढाइ गरेका खप्तड स्वामीले आफ्नो पुस्तक विचार विज्ञान पुस्तकमा लेख्छन् – कुनै पनि रोग शरीरमा आफै आउँदैन जब हामी बोलाउँछौ तब आउँछ । यदी हामी रोगको बारेमा मात्र विचार गर्छौं , रोग लाग्ने बढी सम्भावना रहन्छ ।
अहिले मानिसलाई घरभित्र कोरोनाको निहुँमा थुनेर कोरोनाको बारेमा मात्रै सोंच्ने र भयग्रस्त बनाइयो । यो आधुनिक मनोविज्ञानले समेत सिद्ध गरेको कुरा हो । वैदेशिक रोजगारबाट उल्लेख्य रकम आर्जन गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो षड्यन्त्र बुझेका छन् जस्तो लाग्छ तर उनी पश्चिमाहरुको नीतिको खुलेर विरोध गर्न सक्तैनन् ।
तसर्थ उनले लकडाउन चाँडै खोले र आर्थिक क्षेत्रको असर कम गर्न आत्मनिर्भर भारत र लोकल उत्पादनलाई भोकल गराउँदै प्रयोग गर्नु पर्ने नारा अगाडि सारेका छन् । हामीले पनि लकडाउन तोड्दै सामान्य जीवनतर्फ फर्कने र रेमिटेन्सको विकल्पको रुपमा कृषिको विकासलाई अगाडि सार्नु पर्ने हो । तर हाम्रो सरकारले आँट देखाइरहेको छैन ।